आगामी निर्वाचनमा राप्रपाको राम्रो परिणाम आउने छ – Kamdardainik
९ भाद्र २०७८, बुधबार ९ भाद्र २०७८, बुधबार JB Puri	0 Comments
मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
मुलुकको वर्तमान राजनिितका बारेमा भन्नु पर्दा देशको राजनीति अस्थीर छ । वाह्य शक्तिहरुको चलखेल बढिरहेको छ, नेपालीको भविष्य अन्धकारतिर धकलिँदै लगिएको छ । जुन नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यो भएको देखिँदैन । नेपालमा विकास, सुशासन, स्थीरता समृद्धि नेपाली जनताको चाहना हो । त्यो सपनाहरु चकनाचुर भएको छ । मुलुकमा जुनसुकै सरकार आए पनि जनताप्रति बफादार भएको देखिँदैन । कम्यूनिष्टहरुकै कुरा गरौ । जनताले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए तर उनीहरु मिल्न सकेनन् । आज काँग्रेसको हातमा सरकारको नेतृत्व पुगेको छ । यति बेला जनता कम्यूनिष्ट शासन राम्रो कि काँग्रेस सरकार राम्रो लेखाजोखा गरिरहेका छन् । जनता स्थिरता विकास र शान्ति चाहिरहेका छन् ।
त्यसो त यतिबेला महामारीको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनालाई निमन्त्रण (निर्मुल) गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको खोज सबै जनतालाई समयमै लगाउन सके भन्ने देउवाको राजनीतिक उचाइ बदल्ने छ ।
यतिखेर अन्य क्षेत्रतिर भन्दा सरकारले कोरोनातिर बढि ध्यान दिँदा उपयुक्त होला । सरकार त जसले पनि चलाउँछ, प्रधानमन्त्री त जो पनि होलान् तर असल प्रधानमन्त्रीले इतिहास बदल्ने छ । आज देउवालाई फेरि एउटा अवसर आएको छ । डेढ वर्षमा धेरै काम नगरेपनि देउवाले देशै भरि खोप समयमै लगाए, पुर्वाग्रह रहित शासनले मात्र देउवाको शासनलाई अब्बल मान्ने छ ।
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शेरहादुर देउवा आउनुभएको छ, यहाँलाई यसमा के भन्नुछ ?
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जनताले बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । सर्वाेच्च अदालतको पुरमादेशले बताइएको हो । जुन पाँच दलीय गठबन्धन मिलेर अहिलेको यो सरकारलाई साथ दिइएको छ, यिनिहरुको उद्देश्यभनेको एमसिसी पारित गराउने दलिय वागवन्डा र वाडीचुडी राख्ने रहेको छ । र यिनीहरुले नेपाललाई अफगानिस्तान, र फिजिकरण जस्तै बनाउन खोज्दै छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री त पटक पटक भए तर उनले देश र जनताको लागि राम्रो काम भन्ने छैन ।
सत्ता टिकाउन देउवालाई माहिर खेलाडीको रुपमा लिइन्छ । पैसा र पदको लागि पर्नेहरु कहिले काँग्रेस, कहिले कम्युनिष्ट गर्छन् । अहिले पनि राजनीतिमा त्यहि विकृति भित्रिएको छ ।
अब संसदको बाँकी अवधि निर्वाचन नहुने स्पष्ट भएको छ, तर राप्रपाले निर्वाचनको माग गरिरहेको छन् नि ?
प्रजातन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य हो । हामी ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान तयार छौं । तत्पर छौं । हामी जनताकै माझ गएर यी गणतन्त्रवादीहरुको क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने छौं । महँगी, भ्रष्टाचार, वेरोजगारी लगायतका प्रमुख मुद्दा उठाएर हामी जनतामा जान तयार भएका हौं । हामी हाम्रो प्रमुख एजेण्डा बाटै यस पटक राम्रो परिणाम ल्याउने विश्वास लिएका छौं । विगतमा राप्रपाहरु फुटेर जनतामाझ गए, त्यसको नराम्रो परिणाम भोग्नु प¥यो । यस पटक राप्रपाका तीनै अध्यक्षहरुले गिता छोएर अब नफुट्ने कसम खाएका छन् । यसले आम नेता कार्यकर्तामा राम्रो सन्देश गएको छ । यदि राप्रपाका नेताहरु एकतावद्ध भएर निर्वाचनमा जाने हो, राम्रो परिणाम आउने छ । राप्रपा विगतमा तेस्रो शक्ति छँदै अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको हो । अब फुटेर नेताहरुले इतिहास दोहो-याउनु हुँदैन ।
राप्रपाको केन्द्रिय महाधिवेशन कात्तिक २७ देखि ३० गते हुदैछ । यो महाधिवेशनमा तपाई यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?
यसै शिलशिलामा आगामी कात्र्तिक२७,२८, २९ र ३० गते राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । म यस महाधिवेशनमा आफ्नै एजेण्डा लिएर केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने तयारीमा छु । मैले पार्टीको लागि राम्रो काम गर्दै आएकाले केन्द्रीय समस्या सानदार रुपमा विजयी हुनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु । म जस्तै अरु युवा पुस्ताले पनि निर्वाचन जित्नु पर्छ भन्ने चाहन्छु । युवामा एकता भयो भने महाधिवेशनमा युवाहरुको लागि राम्रो हुनेछ ।
हिन्दु राज्य र राजसंस्था राप्रपाको वटम लाइन भए पनि यस विषयमा यतिबेला राप्रपा किन बोलिरहेको छैन ?
राप्रपाको प्रमुख एजेण्डा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हो । त्यो एजेण्डाभन्दा राप्रपाका सबै तहका तमाम नेता कार्यकर्ता लागेका छैनन् । तर विगतमा कोरोनाका कारणले मात्र हामी खुलेर जनतामा जान नसकेको हो तर हाम्रो अभियान जारी छ । राजसंस्थालाई हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा लिने गरेका छौ र हिन्दु राष्ट्र, जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हामी आफ्नो ठाउँबाट सधै अग्रसर हौं । वास्तविक रुपले भन्नुपर्दा सबै जनजाति, धर्म, संस्कृतिलाई बचाई राख्न र एकतावद्ध पार्न पनि हिन्दुधर्मसँगै राजसंस्थाको पूनरवहाली गर्नुपर्छ ।
मुलुकको लागि वास्तविक रुपमा भन्नु पर्दा कस्तो सरकार आवश्यक छ ?
विगत केही वर्ष यता गणतान्त्रिक सरकार आएपछि नेपाली जनताले वास्तविक सरकारको अनुभुती गर्न सकेका छैनन् । त्यस कारण हामीले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि राजा सहितको प्रजातान्त्रिक सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ । तब मात्रै त्यस दिन नेपाली जनताले साच्चिकै आफ्नो सरकारको अनुभुति गर्ने छौं । राजाविना देशमा राजनीति र विकास हुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा केही वर्ष यताका सरकारले देखाइ सकेको अवस्था छ ।
फेरी राप्रपा महाधिवेनशनतिर फर्काै । आगामी महाधिवेशनमा तपाई कुन प्यानलमा लाग्नुहुन्छ ?
स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा म राप्रपाको सहि विचार र सिद्धान्तको आधारमा लागेको छु । कुनै व्यक्ति वा प्यानल भनेर लागेको होइन । महाधिवेशनमा पनि म कुनै प्यालनमा लाग्ने छु ।
अब महाधिवेशनमा दोस्रो पुस्तालाई जिताउन पर्छ भनिदैछ नि ?
मलाई पनि महाधिवेशनमा धेरै भन्दा धेरै युवा पुस्ताले जितुन भन्ने लाग्छ । जित्नु होला पनि । र अब दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनु पर्छ ।
नेपालमा भइरहेको विदेशी चलखेललाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा विदेशीले फुटवल ग्राउण्ड बनाएका छेन । जो आए पनि नेपाललाई पकडमा राख्न चाहन्छन् । धर्म परिवर्तन गर्न पैसाकै चलखेल समेत भइरहेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालका नेता भनिएकाहरु विदेशीको इशारामा चल्न तछाड मछाड गरिरहेका छन् । विदेशी इशारामा चल्ने, विदेश इशारामा आफ्नो रणनीति बनाउने, विदेश पैसा खाने नेताहरुबाट देशको भलो कसरी होला । हिजो राजाको नेतृत्वमा सत्ता हुँदा त्यसो थियो त ? आज जनताले मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । एमसिसी होस् वा अन्य कुरामा होस् नेपालमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको देखिन्छ । विदेशी मनसाय पुरा गर्न नेताहरु तछाड मछाड गरेको अवस्था छ ।
अन्तमा देशवासीलाई के सन्देश छ ?
म नेपाली जनता समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो संघीयता, गणतान्त्रिक व्यवस्था, धर्मनिपेक्षता खारेज गर्न सघाउन आम नेपाली जना एकतावद्ध हुनुहोस् । हाम्रो धर्म संस्कृति, राजतन्त्रलाई फेरि पहिलेको अवस्थामा ल्याउन एकजुट हुन पनि देशवासीमा मेरो आग्रह छ ।
← शिवकुमार बरुवालले एनआर एन ए को उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने
‘अदालतको फैसलाप्रति तुष्टिकरण र व्यङ्ग्यको अर्थ रहन्न’ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ →
१६ श्रावण २०७८, शनिबार JB Puri 0
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार JB Puri 0